पूँजी बढाउँदै नेप्से, ६६.६७ प्रतिशत बोनसको प्रस्ताव | गृहपृष्ठ
Home लगानी पूँजी बढाउँदै नेप्से, ६६.६७ प्रतिशत बोनसको प्रस्ताव
पूँजी बढाउँदै नेप्से, ६६.६७ प्रतिशत बोनसको प्रस्ताव
पुस २६, काठमाडौं (अस) । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पुस २९ गते आइतवार ३७ औं वार्षिक साधारण सभा गर्दैछ । नेप्सेले प्रस्तावित ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव सहित साधारण सभा गर्न लागेको हो । हाल रू. ३० करोड चुक्तपूँजी रहेको नेप्सेको बोनस पश्चात रू. ५० करोड चुक्तापूँजी पुग्नेछ ।
गत वर्ष भने नेप्सेले ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । नेपाल सरकार सहित नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआइडिसी र ब्रोकर संघको शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीमा सबैभन्दा बढी ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको छ । यस बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४ दशमलव ६० प्रतिशत, एनआइडिसीको ६ दशमलव १२ प्रतिशत र ब्रोकर संघको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।
नेप्सेको मुनाफामा भने लगातार गिरावट आएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीको भनाइ छ । गत वर्ष रू. ३७ करोड २० लाख नाफा गरेको नेप्सले यस वर्ष रू. २६ करोड १ लाख मात्र नाफा गर्न सफल भएको पराजुलीको भनाइ छ । नेप्सेले लिने कमिसन घटेकाले पनि नाफामा असर परेको उनले प्रष्ट पारेका छन् । साधारण सभा अपरान्ह ४ बजे नेप्सेको भवन सिंहदरबारमा हुँदैछ ।